Bazinikela Ngokuvumayo EMexico | Funda
KUCHUKUMISA ngokwenene ukubona ukuba luyanda ulutsha lwamaNgqina oluphila ubomi obulula ukuze lwandise ubulungiseleli balo. (Mat. 6:22) Luluphi utshintsho olulwenzayo? Yiyiphi imiqobo olujamelana nayo? Ukuze siphenduleke, makhe sive kolo sele lukhonza eMexico.
“KWAKUZA KUFUNEKA SENZE UTSHINTSHO”
UDustin noJassa baseUnited States batshata ngoJanuwari 2007. Kungekudala, bazithengela iphenyana ekwakukudala belifuna ukuze bahlale kulo unyaka wonke. Eli phenyana balibeka kufuphi neAstoria, eOregon,eUnited States, idolophu entle engqongwe ziinduli ezinamahlathi neentaba ezithe rhwelele ikhephu, kumganyana nje ongephi ukusuka kuLwandlekazi iPasifiki. UDustin uthi: “Yonk’ indawo ophosa amehlo kuyo yayisithi ndijonge!” Esi sibini sasivakalelwa kukuba siphila ubomi obulula, sithembele ngoYehova. Sasisithi, ‘Siphila kwiphenyana elincinane kangangeemitha ezi-8 nje kuphela, sisebenza isingxungxo, sikwibandla lolwimi lwasemzini, ibe simana sisiba ngoovulindlela abangabancedani.’ Ethubeni, saqonda ukuba siyaziqhatha. UDustin uthi: “ Endaweni yokuxhasa ibandla, sasichitha ixesha elininzi silungisa elo phenyane. Sasisazi ukuba, xa sifuna uYehova abe kwindawo yokuqala ngokwenene kubomi bethu, kwakuza kufuneka senze utshintsho.”
UJassa wongeza athi: “Ngaphambi kokutshata, ndandikwibandla lesiNgesi eMexico. Kwakumnandi apho, ibe ndandinqwenela ukubuyela kulo.” Ukuze ukhule umdla wabo wokuya kukhonza kude, kuNqulo Lwentsapho, uDustin noJassa bafunda amabali obomi abazalwana noodade abafudukele kwamanye amazwe, apho amasimi ayelungele ukuvunwa. (Yoh. 4:35) UDustin uthi: “Nathi sasifuna ukuzivela ngokwethu loo meko.” Ngoko, bathi bakuva ngabahlobo ukuba eMexico kukho iqela elisandul’ ukumiselwa elidinga uncedo, bagqiba ekubeni baye. Bayishiya imisebenzi yempangelo, bathengisa iphenyana labo baza batshona eMexico.
“BOBONA BULUMKO SAKHA SABENZA”
UDustin noJassa baya kuhlala kwidolophu yaseTecomán—eyayisekufuphi noLwandlekazi iPasifiki kodwa kumgama omalunga neekhilomitha ezingama-4 300 kumazantsi eAstoria. UDustin uthi: “Endaweni yokuhlala kuloo mpepho iphephezela kamnandi ngoxa singqongwe ziintaba ezintle, ngoku sitshiswa ngamalanga, ibe ayikho enye into oyibonayo ngaphandle kwemithi yeelamuni.” Ekuqaleni, kwaba nzima ukufumana umsebenzi. Ngenxa yokungabi namali, kwafuneka baqhele ukutya loo nto ikhoyo. UJassa uthi: “Kodwa kwakuthi xa kuba nzima ngakumbi, izifundo zethu zeBhayibhile zisiphe iimango, iibhanana, iipopo neengxowa zelamuni!” Ethubeni, bafumana umsebenzi kwinkampani eseTaiwan efundisa iilwimi isebenzisa i-Intanethi. Ngoku baphila ngaloo mali.
Bavakalelwa njani ngobu bomi butsha? Bathi: “Oku kufuduka bobona bulumko sakha sabenza. Zange khe lomelele kangaka ulwalamano lwethu noYehova kuquka olwethu njengendoda nomfazi. Yonk’ imihla senza izinto kunye—ukuya entsimini, ukuxubusha ngendlela yokunceda izifundo zeBhayibhile, ukulungiselela iintlanganiso. Asisaphazanyiswa ngamaxhala obomi esasikade sinawo.” Baleka bathi: “Ngoku kukhona siyiqonda kakuhle inyaniso yesithembiso esikwiNdumiso 34:8 esithi, ‘Ngcamlani nibone ukuba uYehova ulungile.’”
YINTONI EQHUBA LA MAWAKA AZINIKELE NGOKUVUMAYO?
Bangaphezu kwama-2 900 abazalwana noodade—abatshatileyo nabangatshatanga, abaninzi kubo baneminyaka engaphezu kwama-20 nengama-30—abaye bafuduka kwimimandla yaseMexico nalapho kufuneka abavakalisi boBukumkani abangakumbi. Yintoni ebaqhubela ekwenzeni lo msebenzi unzima? Xa bephendula abaninzi kubo bachaza ezi zizathu zithathu:
Kukuthanda uYehova nabantu. ULeticia wabhaptizwa eneminyaka eli-18. Uthi: “Xa ndandizahlulela kuYehova, ndandiqonda ukuba oko kuthetha ukumkhonza ngentliziyo nomphefumlo uphela. Ngoko ukuze ndimbonise oko uYehova, ndagqiba ekubeni ndisebenzise ixesha elininzi namandla am ekumkhonzeni” (Marko 12:30) UHermilo, otshate noLeticia ngoku, yena wayeseneminyaka nje engaphezu kwama-20 xa wayefuduka esiya kunceda apho kufuneka abavakalisi boBukumkani abangakumbi. Uthi: “Ndaqonda ukuba ukunceda abantu bazi uThixo kwakuya kuba yeyona ndlela ibhetele yokubonisa ukuba ndiyabathanda.” (Marko 12:31) Ngoko washiya isixeko esiphambili iMonterrey apho wayesebenza ebhankini ephila tofotofo, waya kuhlala kwidolophu encinane.
Sifuna uvuyo lokwenene noluhlala luhleli. Emva kokubhaptizwa kwakhe, uLeticia wahamba nomnye udade onethuba enguvulindlela baya kwidolophu ekwanti, bagqiba inyanga beshumayela. ULeticia uthi: “Ndandingakholelwa. Ndavuyiswa gqitha kukubona umdla ababenawo abantu kwisigidimi soBukumkani. Yathi iphela loo nyanga, ndabe ndisithi, ‘Yile nto ke endiyifunayo ebomini!’” NoEssly, udade ongatshatanga oneminyaka nje engaphezu kwama-20, luvuyo olwamtsalela kule nkonzo. Ngoxa wayesafunda kumabanga aphakamileyo, wayedibana namaNgqina amaninzi anenzondelelo awayekhonza apho kufuneka abavakalisi abangakumbi. Uthi: “Ukubona indlela ababevuya ngayo abo bazalwana noodade kwandenza ndanqwenela ukuphila njengabo.” Baninzi oodade abaye bavakalelwa njengoEssly. Enyanisweni, bangaphezu kwama-680 oodade abangatshatanga abakhonza kwiindawo ezifuna abavakalisi abangakumbi eMexico. Ngamana sonke singawuxelisa lo mzekelo wabo!
Sifuna ukuphila ubomi obunenjongo nobanelisayo. Ukugqiba kwakhe esikolweni, uEssly wanikwa imali yokuya eyunivesithi. Oontanga bamkhuthaza ukuba axhakamfule elo thuba ukuze aphile “ubomi obuqhelekileyo”—afumane isidanga, umsebenzi, imoto nethuba lokukhenketha. Kodwa ke, wayengaboni ngolo hlobo. Uthi: “Babebaninzi ababesukela ezi zinto kubahlobo bam abangamaKristu, ndabe ndibona ukuba akusabalulekanga nganto ukukhonza uThixo. Ndaphawula nokuba bagqibela ngokuxakwa ziingxaki abadibana nazo njengoko bezixakekisa ngezinto zeli hlabathi. Mna ke, ndandifuna ukuchitha ubutsha bam ndikhonza uYehova ngokupheleleyo.”
UEssly wenza izifundo ezithile ukuze abe nobuchule obabuza kumnceda afumane umsebenzi wokuzixhasa xa enguvulindlela, waza ke ukuzigqiba kwakhe wafudukela kwindawo efuna abavakalisi boBukumkani ngokungxamisekileyo. Wada wafunda neelwimi zabantu balapho bohlanga lwamaOtomi namaTlapaneco. Xa ecinga ngaloo minyaka mithathu eshumayela kwanti, uthi: “Le nkonzo yandinika ulwaneliseko nobomi obunenjongo. Eyona nto ibalulekileyo, indincede ndanolwalamano ngakumbi noYehova.” UPhillip noRacquel, isibini esineminyaka engaphezu kwama-30 saseUnited States, bathi: “Ihlabathi litshintsha ngokukhawuleza kangangokuba abaninzi abaqiniseki ngobomi babo. Kodwa ukukhonza apho sisafumana abantu abaninzi abaphulaphula isigidimi seBhayibhile kusenza sizive siphila ubomi obunenjongo. Kusishiya saneliseke gqitha!”
Kakade ke, nayo le inkonzo inolwayo ucelomngeni. Olunye kukufumana imali yokuzixhasa. Kufuneka ulungele ukuphila ngendlela yabantu balapho ukuze ukwazi. UVerónica, osele enexesha enguvulindlela uthi: “Kwenye indawo, ndandipheka ndize ndithengise izinto ezibiza imali encinane. Kwenye, ndandithengisa impahla ndize ndichebe neenwele. Ngoku, ndincedisa ekucoceni komnye umzi ndize ndifundise abazali abasandul’ ukuba nabantwana iindlela zokuthetha nabantwana babo.”
Ukuziqhelanisa nezithethe ezitsha namasiko ahlukileyo kunokuba nzima ngakumbi xa uhlala phakathi kwabantu bomthonyama abahlala kummandla okwanti. Kwaba njalo. Kwakunjalo kuPhillip noRacquel xa babeshumayela kubantu abathetha isiNahuatl. UPhillip uthi: “Izithethe zabo zazahluke gqitha.” Bancedwa yintoni? Uthi: “Sanikela ingqalelo kwizinto ezintle awayenazo amaNahuatl—ukumanyana kweentsapho zawo, ukunyaniseka kwawo nokuba ziimvuzemvuze kwawo ngesisa.” URacquel wongeza athi: “Safunda lukhulu ngokuhlala apho nangokukhonza kunye nabazalwana noodade abahlala kuloo mmandla.”
Ukuba unomdla wokuya kukhonza kummandla okwanti, yintoni onokuyenza ukuzilungiselela? Abazalwana noodade asele besuka kule mimandla bathi: Qala ngokuzama ukuphila ubomi obulula ufunde ukwaneliseka. (Fil. 4:11, 12) Yintoni enye onokuyenza? ULeticia uthi: “Ndandiyiphepha imisebenzi eza kufuna ixesha elide indibophelele ndawonye. Ndandifuna oza kundenza ndikwazi ukufuduka nanini na, ndiye naphi na.” UHermilo uthi: “Ndafunda ukupheka, ukuhlamba impahla nokuayina.” UVerónica uthi: “Ndaqala ndisesekhaya, ndincedisa ekucoceni, ndafunda ukupheka ukutya okunesondlo ngoxa kubiza kancinane. Ndafunda nokonga imali.”
ULevi noAmelia baseUnited States asele betshate iminyaka esibhozo bathi, ukukuthandazela ngokungqalileyo ukuya kukhonza kwabo eMexico kwabanceda gqitha. ULevi uthi: “Sabala imali eyayiza kufuneka ukuze sikhonze unyaka kwanti saza sathandaza kuYehova ukuba asincende sifumane kanye loo mali.” Kwiinyanga nje ezimbalwa, babesele bekwazile ukuqokelela loo mali babeyikhankanye kumthandazo wabo baza abaphozisa maseko bafuduka. ULevi uthi: “UYehova wayesiphendule kwisicelo sethu esingqalileyo, ngoku kwakusele thina ukuba sidlale eyethu indima.” UAmelia waleka athi: “Sasicinga ukuba siza kuhlala unyaka nje kuphela, kodwa sesigqibe iminyaka esixhenxe ngoku, ibe asikacingi ngokuhamba! Ukuhlala apha kusinceda sibone ngokungqalileyo ukuba uYehova uyasinceda. Yonke imihla, siyabubona ubungqina bokulunga kwakhe.”
Umthandazo uye wanendima ebalulekileyo nakuAdam noJennifer, isibini saseUnited States esikhonza kwintsimi yesiNgesi eMexico. Bathi: “Sukulindela ukuba aza kude adlule onke amafu. Chazela uYehova ngomnqweno wakho, emva koko wenze oko ukuthandazeleyo. Phila ubomi obulula, bhalela kwisebe lelizwe onqwenela ukuya kukhonza kulo, uze emva kokubala iindleko, uthabathe amanyathelo!” * Ukuba wenjenjalo, uya kuphila ubomi obubangel’ umdla ngoxa usikelelwa nguThixo.
^ isiqe. 21 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, funda inqaku elithi “Ngaba ‘Ungawelela EMakedoni’?” kuBulungiseleli Bethu BoBukumkani buka-Agasti 2011.
Yiyiphi indlela ekhethekileyo abaqeqeshwa ngayo abo bazinikele ixesha elizeleyo kumsebenzi wokushumayela ngoBukumkani?
Bazinikela Bengaqhutwa Mntu​—⁠EMadagascar
Bazinikela Bengaqhutywa Mntu​—ETurkey